WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA
Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020
Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas akka ta’e ifa ta’aa jira. Warri qabsoon hidhannoo nu hin baasu jechaa turanillee suuta suuta dhugaa kana fudhachaa akka jiran ni mul’ata. Kana jechuun WBO cimsuun barbaachisaa akka ta’e hubatamaa jira jechuu dha. Qabsoon karaa nagaatiin godhamu hin barbaachisu jechuu osoo hin taane, haalli qabsoon nagaa keessatti godhamu yeroo irraa gara yerootti hammaachaa akka deeme fi wanti karaa nagaa jedhamu haphachaa akka deemu waanuma hubatamaa jiruu dha. Uummatni Oromoo karaa nagaatiin falmatus waraanni irratti labsamuu fi ajjeefamuun irraa hin oolle. Kanaafuu qabsoo hidhannoo jabeessuun filannoo (option) osoo hin taane dirqama ta’ee jira.
Erga haalli baay’ee hammaachaa deemee as (keessumaayuu erga Haacaaluun ajjeefamee as) duulli uummata keenyarratti godhamu yeroo kamuu caalaa hammaachaa waan dhufeef, Qeeroon lakkofsi isaanii guddaa ta’e WBOtti makamaa akka jiran himamaa jira. Haa ta’u malee, yeroo tokko tokko dhimma WBO yoon yaadu waa hedduutu na yaachisa. Yeroo ammaa yeroo bitamtootni, gantootni fi basaastotni heddoomaa jiranitti ofeeggannoo cimaa godhuun baay’ee murteessaa dha. WBOn dhimma kana hin too’atu jechuu kiyya osoo hin taane, dhimmootni tokko tokko yaaddoo waan natti uumaniifi. Fakkeenyaaf, akkuma miidiyaalee hawaasummaa kan akka Face Book irratti argamaa jirutti, basaastotni miseensota WBO of fakkeessanii balaa fidaa akka jiranii dha. Kun dhugumatti waan baay’ee nama yaaddessuu dha. Kanaaf, gaafiileen tokko tokko fakkeenyaaf kan armaan gadii kun sammuu kiyya keessa deddeebi’u.
Ijoolleen haaraan WBOtti makamuuf yoo deemu, Hoggantootni fi leenjistootni WBO ijoollee haaraa kana akkmiin simatu? Basaastota ta’uu isaanii ykn warra dhugumatti qabsoo kanatti dabalamuu barbaadan ta’uu isaanii akkamitti addaan baafatu?
Ijoolleen haaraa WBOtti makaman kun leenjii fudhatanii dirqamatti yoo bobba’an hoo akkamitti too’atamu? fi kkf
Egaa wanti asirratti hubatamuu qabu tooftaa, tarsiimoo fi akkaataa WBOn ittiin hojjechaa jiru gaafii keessa galchuuf osoo hin taane, yeroo ammaa kana keessatti wanti hunduu waan nama shakkisiisaniif gaafiilee kana kaase. Waanuma ta’eefuu, ani akka gorsaa WBO ta’ee dubbachuuf osoo hin taane, garuu WBOn ofeeggannoo akka godhu yaada dhuunfaa tokko tokko dhiyeessuun barbaada.
Ijoollee haaraan WBOtti yoo makaman duubeen (background) ijoollee tanaa sirriitti qoratamuu akka qabu. Bakkee (iddoo) isaan dhufanii fi maal hojjechaa akka turan; laalcha maalii akka qaban fi eenyu wajjin walqunnamtii qabaachaa akka turani fi jiran laalamuu fi sirriitti qoratamuu qabu jechuu kooti.
Ijoollee WBOtti makaman qofaa osso hin taane, maatii fi firoottan isaaniillee hubannoo keessa galuu qabu jedheen amana. Kuni Qeerroo kutatanii bosonatti galuu barbaadan shakkuu fi kutannoo fi murannoo isaanii gaafii keessa galchuuf osoo hin taane, dhimmoota qulqulleeffachuun murteessaa waan ta’eefi.
Naannoolee WBOn keessatti socha’u keessa uummatni keenya miseensota WBO beekuu waan malaniif, basaastotni naannoo sana deemanii uummata gowwoomsan addaan baafachuun kan danda’amu yoo ta’e, hojii WBOtiifillee gargaarsa ta’a jedheen yaada. Uummatnis WBO wajjin akka hojjetu hubachiisuun barbaachisaa dha.
Dhumarratti, dhaamsi ani akka ilma Oromoo tokkootti dabarfachuu barbaadu. WBO gargaaruu fi jabeessuun dirqama Oromoo hundaa ta’uu qaba. WBOn bilisummaa argamsiisuuf qofaa osoo hin taane; bilisummaa boodallee bilisummaa fi walabummaa argannu tikfachuu fi humna Oromiyaa eegu (Oromian National Defense Force) waan ta’uuf, isa kana hubannoo keessa galchuudhaan WBOn akka jabaatu gochuun dirqama Oromummaa ti. Warri hidhannoo fi humna jabaa qaban hangam akka sodaataman, Tigraayi akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda’ama.
Hanga dhima biraatiin walitti deebinutti nagaatti.
ONN: Haala yeroo ammaa irratti Ibsa Gaazexaa ABOn kennaa jiru Bitootessa 04, 2020 Oduu Oromoo:…
WBOn yoomiyyuu caalaa deeggarsa argachuu fi cimuu qaba Berhanu Hundee, Amajjii 1, 2021 Barreeffamani gabaabaan…
Hidhamtoonni Siyaasa Mooraa Sanqallee keessa jiran Yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa gochaa jiru. Adooleessaa 8/2019…
Namoonni WBO walqunaman eergaa kana gara keesssan akka dhaqabsiisan godhamuu qaba
Querro is not a terrorist . Eskinder Nega last year went to the United Nations asking Querro to be labeled as a terrorist group , Balderas president Eskinder Nega himself is commiting Crimes Against Humanity against Christians , against Amaras , against Gurages , against Wolaitas , against Gamos as the current evidence showed it was him Eskinder Nega who kept on plotting and instigating the Crimes Against Humanities terror acts ..
The truth came out about the 86 people who died in October 2019 , about the Shashamane Arsi Ziway Benishangil Gumuz barbaric mutilations killings , now the world knows Querro Oromos are not the terrorists but the Balderas terrorists are the terrorists commiting the Crimes Against Humanities .
Hanqinni qabsoo #SibiilaaHidhannoo Oromoo maali? ❤💚❤